Home Wararka Sucuudiga oo war cusub ka soo saaray dhoofka xoolaha Soomaaliya
Sucuudiga oo war cusub ka soo saaray dhoofka xoolaha Soomaaliya
Hundreds of camels wait at Mogadishu's seaport to be exported to Saudi Arabia on March 8, 2013. AFP PHOTO / Mohamed Abdiwahab (Photo credit should read Mohamed Abdiwahab/AFP/Getty Images)
Boqortooyada Sacuudiga ayaa dib u fasaxday xoolihii Soomaaliya laga dhoofin jiray ee loo iibgeynayey sacuudiga, kuwaas oo sanadihii u dambeeyay xayirnaa. Arrintan ayaa timid kaddib markii ay maanta labada dal magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen heshiiska dib u furidda dhoofka xoolaha dalka.
Wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in tallaabadan ay timid kaddib markii ay dedaal dheer ku bixiyeen wasaaradda, madaxda dalka iyo ganacsatada qaar. Soomaaliya si toos ah xoola uguma dhoofin Sacuudiga tan iyo sanadkii 2016-kii.
“Arrintan ayaa timid kaddib markii ay maanta labada dal magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis“
Previous articleQoor Qoor oo ka hor yimid qoraalkii kasoo baxay Guddiga Doorashooyinka
Next articleEscape from Mogadishu is an irresistible ride full of surprises
Dowladda Ingiriiska oo aargoosi u aragta xariga muwaadan u dhashay Ingiriiska...
Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay Gobolka Mudug